Cudurada iyo cayayaanka basasha: sharaxaad iyo daaweyn
Fikradda "hargabka doofaarka" ayaa ah ma aha oo kaliya caan ah, laakiin, nasiib daro, bayaanka xaqiiqda murugo leh. Wixii ugu taajirsan ee nafaqooyinka iyo dhakhaatiirta cudurada bini-aadanka, basasha, waxay soo baxaysaa, laftiisa ayaa u nugul cudurada iyo cayayaan cayayaanka. Iyo in this buurta basasha kaliya nin ayaa awoodi karo inuu ka caawiyo khudradda ugu caansan.
Basasha la kariyay ee guriga xilliga jiilaalka: qaacidada tallaabo tallaabo fudud ah oo leh sawirro iyo fiidiyowyo
Basasha dhaqameedka iyo toonta waa badeecooyin aan taas oo macquul aheyn in la qiyaaso nadaafada culeyska. Waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo noocyada kala duwan ee caadiga ah ama asalka - saxamada, waxay leeyihiin tayada dhadhanka ee xiisaha leh iyo, ugu muhiimsan, waxay leeyihiin faa'iidooyin aan caadi ahayn. Dhadhaminta iyo faa'iidooyinka soo go'idda Bambooyinka inta badan waxaa loo isticmaalaa ceeriin, laakiin marka la karinayo waxaa jira kala duwanaansho badan oo lagu karsado khudradan, iyo pickling ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah.
Sidee loo qariyaa qaanso qaanso ah
Basasha - mid ka mid ah khudaarta ugu caansan. Dadka badankood waxay maqlaan waxtarradooda waxayna doorbidaan inay ku daraan suxuun kala duwan. Gaar ahaan waa faa'iido leh in ay u isticmaalaan xilliga jiilaalka iyo xilliga dayrta ilaha fiitamiinada. Si kastaba ha noqotee, si khudradda loo yareeyo wax yar, waa lagama maarmaan in si sax ah loo xafido.
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Red Baron"
Basasha "Red Baron" waxay caan ku tahay dhadhankiisa, iyo sidoo kale dhalidda sare. Tilmaamahani wuxuu suurtogeliyey suurtagal u ah noocyada kala duwan ee lagu faafiyo dadka ku nool deegaannada xagaaga gudaha, iyo sidoo kale qaybta geedka helitaanka xaalad gaar ah oo ka mid ah dalagyada muhiimka ah. Si kastaba ha noqotee, noocyo casaan casaan ma aha mid aad u fudud in ay ku koraan on ay u gaar ah, maadaama ay beerashada ay ku lug leedahay geedi socodka agronomic adag oo adag.
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Centurion"
Saldhigga hore ee Dutch-ka ee "Centurion" ayaa maanta ku raaxaysanaya sharafta isdhexgalka, kaas oo marka la eego waxsoosaarkooda iyo dulqaadku aysan helin tartan qiimo leh. Waxay ku adkaatay daryeelka, waxay u adkaysatay dhowr cudur, iyo xittaa lagu kaydiyey waqti dheer. Waa maxay noocyada caanka ah ee caanka ah, sida iyo meesha ay u weynaan karto - waxaan u sheegi doonaa dambe maqaalkan, iyo sidoo kale muujinaya qarsoodiga ah ee sii kordhaya soo saarista miraha qudaarta.
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Carmen"
Basasha si sax ah u degaan meel sharaf leh oo ka mid ah dalagyada khudradda ugu caansan meeraha, sababtoo ah waxaa badanaa loo isticmaalaa karinta. Waxaa jira in ka badan kun nooc oo basasha ah, dhammaantood way ku kala duwan yihiin dhadhanka iyo muuqaalka. Noocyada kala duwan ee noocyada, basasha carmen istaagaan sababtoo ah dhadhanka macaan iyo miisaanka cas ee dhalaalaya.
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Setton"
Basasha "Setton" - kala duwan Dutch, taas oo u fiican u koraya beeralayda xirfad leh. Waxaa la helay sababtoo ah shaqada beeraha ee kala duwan ee Sturon, taas oo ah sababta ay aad u egyihiin, laakiin Setton leeyahay astaamo dheeraad ah ee macaamiisha. Marka xigta, aynu ka hadalno siyaabaha kala duwan iyo waxyaabaha gaarka ah ee beerashada xaalado kala duwan.
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Stuttgarter Riesen"
Basasha waxaa lagu koray meel kasta oo ka mid ah, sababtoo ah waa wax cajiib ah oo faa'iido leh, iyada oo ay ugu wacan tahay heerka sare ee fiitamiinada iyo macdanta, iyo sidoo kale waxa lagama maarmaanka u ah diyaarinta cuntooyinka kala duwan. Sidaa darteed, waa runtii waa adag tahay in la qiyaaso beer beer ah oo aan lahayn xitaa dhowr sariirood ee warshad this. Maanta waxaannu kuu sheegi doonnaa nooca basasha, sida "Stuttgarter Riesen", tixgelinayaan faa'iidooyinka iyo faa'idooyinka, iyo sidoo kale sifooyinka beeraha iyo daryeelka.
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Shetana"
On sariiraha beerta waxaa jira had iyo jeer meel loogu talagalay basasha. Waxay ka kooban tahay fitamiin badan, macro iyo mareeyn oo loo baahan yahay bani-aadamka. Guryaheeda faa'iido leh ayaa si gaar ah loogu baahan yahay xilliga jiilaalka iyo gu'ga, marka ay ka caawiyaan in ay ka fogaadaan fitamiin la'aanta iyo infakshanka. Noocyada ugu caansan ee la goosto xilliga qaboobaha - sida basasha "Shetana", oo leh tayada ilaalinta wanaagsan iyo dhalidda sare.
Sida loo abuuro oo u koro baska Cupido
Basasha waa khudaar badan. Marar dhif ah waxa saxan la diyaariyey iyada oo aan lahayn qaybtan. Oo ay sabab u tahay sifooyinka bogsashada, basasha ayaa si ballaaran loo isticmaalaa daawada dhaqameed. Waa mid aad u caan ah, sidaa daraadeed waxay ku koraan dhamaan beeraha iyo beeraleyda. Waxaa ka mid ah noocyada ugu caansan waxaa loo yaqaannaa noocyada kala duwan ee "Cupido".
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Corrado"
Dalagyada beerta ee dhulka furan waxay helayaan basasha. Iyadoo ay sabab u tahay unpretentiousness, waxaa lagu beeray karo heerkul ah oo kaliya 10-12 ° C. Noocyo hore oo bislaada ah iyo Beelaha ayaa ugu habboon xaaladaha noocaas ah. Waxaa ka mid ah, noocyo kala duwan oo loo yaqaan "baska". Wax ku saabsan sifooyinka, tiknoolajiyada, degitaanka, iyo in laga wada hadli doono maqaalkeena.
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Bamberger"
Basasha ma aha mid ka mid ah dalagyada cuntada ugu weyn, sida sarreenka, bariiska ama baradhada. Si kastaba ha ahaatee, maydka jikada adduunku way sameyn kartaa iyada oo aan lahayn. Ma ka caban kartaa qaansada iyo naftaada naftaada ka soo jeeda. Qaar badan oo ka mid ah noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'bred' ayaa la soo saaray, taas oo khudradda soo baxday midkood midabkoodu jilicsan yahay, ama caddaan, ama xitaa guduud; meeshii ay noqon karto qadhaadh dhadhanka, iyo mararka qaarkood macaan.
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Hercules"
Basasha waxaa loo isticmaalaa diyaarinta cuntooyin badan oo ah noocyadeena, waxaana lagu magacaabi karaa mid ka mid ah dalagyada ugu caansan beerta. Xulashada waxaa la siiyaa noocyada kala duwan ee lagu kala saaro by dhalid, daryeel aan qabyo ahayn iyo dhadhan wanaagsan. Noocyada noocan oo kale ah waxaa ka mid ah noocyada basasha "Hercules". Qeexitaanka noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah Baaskiilada noocyo kala duwan oo kala duwan ah Hercules waa midhaha shaqada ee jilitaanka Dutch.
Sida loo abuuro oo u koro basal "Golden Semko"
Midabka hore u bislaaday "Golden Semko F1" wuxuu ku kala duwan yahay nalalka wareega oo badan oo ka soo baxa miraha hal sano. Wixii miisaankooda la iibsan karo waa 80 maalmood. Isla mar ahaantaana, khudradda oo dhan waxay ka mid yihiin cabbirka isla markaana qaab caadi ah leh miisaanka celcelis ahaan qiyaastii 100 g. Kala duwan ayaa waxaa abuuray tarbiilayaal gudaha ah.
Sida loo abuuro oo u koro basasha "Stardust"
Basasha ayaa ku koray qoyaan kasta. Waxay si isku mid ah u fiican tahay in la isticmaalo foomka labadaba, iyo daaweynta kulaylka hore. Maqaalkani waxaan tixgelineynaa sifooyinka korriinka sii kordhaya ee goobtaada. Noocyo lagu sharaxo basasha "Stardust" - noocyo isku dhafan oo kala duwan, oo laga sameeyay Holland.